hd loader .... — MYSTERY ZILLION
hd loader ....
MZ က အစ်ကို အစ်မများ ချစ်ညီလေးကို PS2 တွက် hd loader များရှိရင် မစကြပါအုံး.... အရေးတကြီးလိုနေလို့ပါ
MZ မှ အစ်ကိုကြီးများ သီတဲ့ သူရှိရင် အဲဒီ အကြောင်းလေးနည်းနည်းရှင်းပြပါလား
အရင်ကတော့ HDDနဲ့ ဆက်မှချိတ်တာတော့ သဘောတရား နည်းနည်း နားလည်တယ်ဗျ
အခုက Network ချိတ်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ထားလည်းဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါချင်ဗျာ
အောက်က Link တွေမှာနည်းနည်း ရှာကြည့်ပါ.
ကျတော် ရှာတာတော့ အဲတာလေးတွေ့တယ် စမ်းတော့ မစမ်းရသေးဘူးဗျ
အောက်ကlinkမှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်အစ်ကိုယ်တွေရေ ၊Rar File နဲ.တင်ပေးလိုက်ရတာဆိုတော.ပြန်တော.ဖြည်လိုက်နော် ၊ ပြီးတော. Boot CD လုပ်ရင်လဲ Folder လိုက်မBurnလိုက်ပါနဲ. ၊ဖြန်.ထားတဲ.Data တွေကိုဒီအတိုင်းပဲ Burn လိုက်နော်။
ဒေါင်းလို့ရဘူး ဗျ Mediafire ဖြစ်နေလို့ တခြား Link လေးပေးပါဗျ